सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 धार + आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत | Androidsis
एशियाई निर्माताको अन्तिम अनप्याक गरिएको कार्यक्रम पहिले नै समाप्त भइसक्यो र हामीलाई दुई उत्कृष्ट उपन्यासहरू छोडिदियो: यो सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट of र सैमसंग ग्यालेक्सी S5 धार + को प्रस्तुतीकरण, प्राविधिक विशेषताहरूको साथ दुई phablets कि बजार को शीर्ष मा तिनीहरूको प्रशंसा।
तपाईंलाई देखाइए पछि सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट of का सबै रहस्यहरू, अब पालो आउँछ ग्यालेक्सी S6 किनारा +, सामसु Samsungको प्रशंसित ड्युअल प्यानल कर्भ टर्मिनलको संस्करण जुन अब 5.7..XNUMX इन्च स्क्रीन छ।
1 सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 एज + को डिजाइन
4 सामसु Samsung ग्यालेक्सी S6 एज + को मूल्य र उपलब्धता
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 एज + को डिजाइन
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 को आगमन संग, कोरियाली निर्माता प्रीमियम समाप्त संग दुई नयाँ फोन देखाएर हामीलाई चकित। के सामसु ?ले आफ्नो फ्ल्यागशिपहरूमा पॉली कार्बोनेट छोडेको छ? नोट5र ग्यालक्सी एस6एजको अन्त्य देखेर यस्तो देखिन्छ कि यो छ।
र यो यो हो कि एज रेन्जको नयाँ सदस्यले परम्परागत संस्करणको जस्तै फिनिश देखाउँदछ: टेम्पर्ड गिलासको लेयरमा लपेटिएको एल्युमिनियम फ्रेम भएको शरीर जुन वास्तवमै रमाइलो स्पर्श प्रदान गर्दछ।
una ठोस निर्माण कि यी सुविधाहरु को एक फोन लायक फिनिश प्रदान गर्दछ। संक्षिप्तमा, हामी यो भन्न सक्दछौं कि सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 एज + को डिजाइन आफ्नो आँखाहरूमा र यसको साना भाइहरूको जस्तै स्पर्शको लागि पनि रमणीय छ।
S6 एज + स्क्रीनaबाट बनेको छ .5.7.२ इन्च सुपर AMOLED प्यानल यसले प्रभावशाली छवि गुणवत्ता प्रदान गर्दै २2560० x १1440 a० पिक्सेलको संकल्प प्राप्त गर्दछ। यदि हामी यसलाई यसको डबल घुमाउरो पक्षमा थप्दछौं, हामी आफैंलाई एक शक्तिशाली फोनको साथ साथै आकर्षक पनि भेट्दछौं।
त्यो हाइलाइट गर्नुहोस् रंगहरू अविश्वसनीय रूपमा तीब्र देखिन्छन् कुनै कोणबाट एक धेरै उच्च छवि गुण प्रस्तावको अतिरिक्त। स्पष्ट रूपमा डबल घुमाउरो प्यानलको तथ्यले सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस Ed एज + लाई परम्परागत मोडेलको जस्तै कार्यहरू प्रदान गर्न अनुमति दिनेछ।
भाग्यवस सामसु atमा केटाहरूले केहि नयाँ विकल्पहरू लागू गरेका छन् जुन तपाईंलाई घुमाउरो डबल पक्षको फाइदा लिनको लागि अझ बढी अनुमति दिनेछ। यसरी हामी केहि बारम्बार प्रयोग गरिएको अनुप्रयोगहरू पहुँच गर्न सक्दछौं उदाहरण को लागी।
के यो नोट of को सट्टा S6 एज + खरीद गर्न लायक छ? खातामा वक्र साइडको कार्यक्षमता लिदै म भन्छु, तर होईन यदि तपाईं फरक फोन राख्न चाहानुहुन्छ भने S6 एज + उत्तम विकल्प हो।
यो स्पष्ट छ कि सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 एज + एक धेरै शक्तिशाली फोन हो। सुरु गर्न हामी यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नेछौं, एक Exynos 7420 XNUMX२० SoC समावेश गरेर,a--कोर चिप-8-बिट वास्तुकलाको साथ जुन वास्तवमै राम्रो प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। ग्यालक्सी एस Ed एजको समान प्रोसेसर के हो? हो, तर एज दायराको भिटामिनयुक्त संस्करणको मामलामा, यसको GB जीबीको DDR6 रमले फरक पार्छ।
अघिल्लो मोडेल जस्तै सामसु Gala ग्यालेक्स S6 एज + सँग आन्तरिक भण्डारणको /२/32। जीबीको साथ फरक कन्फिगरेसनहरू हुनेछ। माइक्रो एसडी कार्ड स्लटको कुनै चिन्ह छैन; सामसुले आफ्ना गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दैन ...
क्यामेरामा अगाडि बढौं। मुख्य लेन्ससँग १ resolution मेगापिक्सल रिजोलुसन छ जसले एफ / १.aअपर्चर प्रदान गर्दछ। फ्रन्ट क्यामेरा 16 मेगापिक्सेल सेन्सरले बनेको छ जसले तपाईंलाई सेल्फ-पोर्ट्रेट र भिडियो कल लिनको लागि पर्याप्त गुणस्तरको साथ अनुमति दिनेछ, तर यसका प्रतिस्पर्धीहरूले प्रस्ताव गर्दछ। अर्को कुरा जुन सामसु Samsungबाट सिकदैन।
अर्को महान तर ब्याट्रीको साथ आउँदछ: ,3.000००० एमएएच एक भन्दा बढिमा निष्पक्ष देखिन्छ। हामीले पर्खनु पर्नेछ र सैमसंग ग्यालेक्सी S6 एज + हाम्रो प्रदर्शन परीक्षणहरूमा प्रदर्शन गर्दछ। अन्तमा, एज दायरा को नयाँ प्रमुख यसको बाहिरी अन्तर्गत Android 5.1 संग आउँछ।
सामसु Samsung ग्यालेक्सी S6 एज + को मूल्य र उपलब्धता
अर्को २१ अगस्त देखि सुरु, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S21 एज + को पहिलो इकाई आरक्षित गर्न सकिन्छ, कालो वा सेतो मा एक मा उपलब्ध 899 यूरोको अनुमानित मूल्य। तपाईको नयाँ स्यामसंग ग्यालेक्सी एस Ed एज + को लागी के लाग्छ?
सैमसंग ग्यालेक्सी S6 किनारा +
अद्वितीय र ग्राउन्डब्रेकिंग डिजाइन
बजारमा सब भन्दा शक्तिशाली फोनहरू मध्ये एक
यदि हामीले तपाईंको स्क्रिनको आकारलाई ध्यानमा राख्यौं भने ब्याट्रि केही हदसम्म निष्पक्ष छ
यो वास्तवमै महँगो फोन हो
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 एज + आधिकारिक अनावरण गरियो
तुलना ग्यालक्सी नोट V VS ग्यालक्सी नोट 4